Carl Henrik Blog
Xisaabinta Bartilmaameedkaaga xorriyadda Maaliyadeed
Kobcinta Maaliyadda Hantida - Ha tagin barashada!
Markaad raadineyso maalgalin hantiyeed (Joint-Venture (JV)) maal maha uun dadka kama baryi kartid - waa inaad ku fikirtaa WIIFT! (Maxaa ku jira iyaga). Dadka lacagta haysta waxay u badan tahay inay si adag uga shaqeeyeen sidii ay u heli lahaayeen waxayna aad uga ilaalin doonaan hantidan guud - Waxay rabaan inay lacagtooda ka shaqeeyaan si kastaba ha noqotee. Haddii caasimada aysan soo celinaynin soo laabasho waa hoos u dhac waxayna suuragal tahay inay ku noolaadaan meel ka baxsan keydka (xaalad runti lumay).
Waa inaad muujisaa waxa “fursad Win-Win” ah ee aad ku deeqi karto iyaga, marka la soo gaabiyo maalgashadayaasha JV waxay doonayaan inay ogaadaan (hal bog);
a) Waa maxay qandaraaska hantida bixinta iyo sababta ay faa'iido u leedahay (xaglo gaar ah ama qiimo jaban)?
sida loo qoro qorshe ganacsi oo tayo lehb) Intee in le'eg ayaa loo baahan yahay iyo faa'iido intee le'eg ayaan helayaa?
c) Muddo intee le'eg ayaa lacagta lagu xidhayaa?
d) sideebaan dib ugu helayaa haddii ay wax khaldan yihiin (maxaa amniga la heli karo)?
e) Yaad tahay adiga maxaadse u aaminsanahay inaad dhammaystirto macaamil ganacsi oo dhan (Xirfadahaaga iyo waayo-aragnimadaada ama xirfadahaaga iyo waayo-aragnimadaada kooxda iwm)
In kasta oo markii hore aad ku habboonaan lahayd dhammaan macluumaadkan hal warqad oo ah A4 (layli aad u wanaagsan oo jidka ag maraya) waa inaad haysataa dukumiinti dheer oo laga heli karo oo lagu ballaarinayo qodobbada kala duwan haddii ay jirto xiisaha bilowga ah, waxaan tan ku sii hayn lahaa ilaa 6 Bogagga ugu badnaan - heshiisyada muddada dheer ama ka sii dheerba waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad lahaato qorshe bas buuxa oo la heli karo. Guji sawirka si Soo qaado tusaha bilaashka ah ee ku saabsan sida loo qoro qorshe ganacsi oo tayo leh.